Gentoo: ငါဘာလို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်တွေလုပ်ဖို့ရွေးခဲ့တာလဲ။ | FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ယခင်စာကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုဖြစ်သော Gentoo Linux အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြရန်လာပါသည်။ ငါဒီပို့စ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရှေ့မှောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒဏ္aboutာရီတွေအကြောင်းအနည်းငယ်နားလည်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေရှိမယ်လို့ငါကတိပေးလိုက်တယ်။ စုစည်း software ၏။ ဤအချက်အလက်များသည်နောင်လာမည့် Gentoo Linux တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်အတွက်အဆင့် (၂၀) ​​တွင်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကတိပေးသည် (ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုကောင်းစွာရေတွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်းတို့သည် ပို၍ ပင်နည်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) ။ နောက်ထပ် ado မရှိရင်, ရဲ့ဖွင့်ကြကုန်အံ့:
3 ./configure ၏မှော်
4 Gentoo တွင်စတင်ပျော်ရွှင်ပါစေ။
၎င်းသည်ပရိုဂရမ်တစ်ခု (အများအားဖြင့် compiler ဟုခေါ်သည်) မှလူ့ဘာသာစကား (C, C ++ files, etc) ဖြင့်ရေးသားထားသောကုဒ်များကိုစက် (binary code) မှနားလည်နိုင်သောကုဒ်သို့ပြောင်းလဲရန်လုပ်ဆောင်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါဥပမာကိုကြည့်ရအောင်။
ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း Christopher Díaz Riveros
ဒါကငါတို့ရဲ့ C program လေးပါ (နောက်ကျရင် C tutorial တွေနောက်မှလိုချင်ရင်ငါဒီခေတ်မှာငါလေ့လာခဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးကိုမင်းပြပေးချင်တာပါ။ ) compiling ပြီးနောက် output ကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်း Chrirstopher Díaz Riveros
လှတယ်မဟုတ်လား the ဤပရိုဂရမ်ကိုပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်“ Hello” ဟူ၍ အနည်းငယ်သာရေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကနားလည်သည်။
.c နှင့် .h ဖိုင်များကိုပရိုဂရမ်များ (ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားအားလုံး၌ကဲ့သို့) များပြားစွာကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရိုးရိုးလေး "Hello" ကိုပုံနှိပ်သည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စုဆောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်ကိရိယာအသစ်များပေါ်လာသည်။ အားလုံးသောကိုယ်စားလှယ်များမှာ command ဖြစ်သည် လုပ်.
Make ဖိုင်တစ်ဖိုင်ယူပါ Makefile နောက်ဆုံးအချက်အနေနှင့်နောက်ဆုံး executable ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည့်အရာများကိုပြုစုသည်၊ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ဤအဆင့်သည်ခေါ်ဆိုသည့်ဖိုင်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည် configure အသုံးဝင်သောဖိုင်တစ်ခုကို compile လုပ်ရန်အတွက် compiler အတွက်လိုအပ်သော variable အချို့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
သင့်အားအရင်းအမြစ်ကုဒ်၏လျှို့ဝှက်ဆုံးနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားသည့်ပရိုဂရမ်၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်သို့သွားမည်။ sudo။ ပထမ ဦး စွာပုံမှန်ခြေလှမ်းများ, ဒါပေမယ့်ငါမှာရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် ./configure သူတို့ကိုအထူးတစ်ခုခုပြသရန်။
--with-insults... နာမတော်ကိုအမှီပြု။ အတိုင်း, sudo နှင့်အတူ compile အလွဲသုံးစားမှု password သင်၏စကားဝှက်တွင်အမှားပြုလုပ်သောအခါတိုင်းသုံးစွဲသူအားစော်ကားမှုကိုခွင့်ပြုသည့်ပျော်စရာကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဘာအတွက်လဲ ကောင်းပြီ၊ သိပ်မကြာသေးခင်က😛ဒါပေမယ့်အချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ များစွာသောဖြန့်ဝေမှုများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။
သင်ကဲ့သို့သော, binary code ဖြန့်ဝေခြင်းများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နိုင်ပြီးသင်ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါကသို့မဟုတ်သင်လိုအပ်သောအရာများရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်သင်၏တရားဝင်ဖြန့်ချိသော binary နှင့်အတူလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ လက်စွဲစာအုပ်။
ခေတ်သစ်မဟုတ်သည့်စက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စက်ယန္တရားအသစ်များသည်အဘယ်ကြောင့်အနည်းငယ် ပို၍ မြန်သည်ဟုထင်ရသနည်း။ တကယ်လို့ပရိုဆက်ဆာကပိုကောင်းရင် RAM ပိုများလာမယ်၊ ပိုကောင်းတယ်၊ ဘာလို့မြန်မြန်သွားမလဲ။ အဖြေကရိုးရှင်းပါတယ် စုစည်း။
အကြှနျုပျ၏အစီအစဉ်များ option ကိုအတူစုစည်းနေကြသည် --march=broadwell... ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်ရဲ့ processor က broadwell (intel i7) ကြောင့်ပဲ။ ဒီရန်အဆင်မပြေ? Broadwell မတိုင်မီမည်သည့်ပရိုဆက်ဆာမဆိုဤ binary ကိုအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ. ငါဒီမှာစုဆောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ် –March အထူးသဖြင့်အထက်ပါအချက်များအားလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ထို့ကြောင့် binary packages သည်မည်သည့် hardware အမျိုးအစားများကိုမည်ကဲ့သို့ထောက်ပံ့ပေးသနည်း။ အလွယ်တကူသူတို့အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရွေးချယ်မှုဖြင့်စုစည်းထားသည်။ ၎င်းသည်ဟာ့ဒ်ဝဲအမျိုးအစားအားလုံး (အနည်းဆုံးလိုက်ဖက်မှုအတွက်) ၎င်းကိုဖတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။
တကယ့်ပြproblemနာ ... i3 အတွက်စုစည်းထားသောပရိုဂရမ်များကိုသင်သုံးလျှင် ... i7 ၏သက်ရောက်မှုအားလုံး (သို့မဟုတ်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာ AMD နှိုင်းယှဉ်မှုများ) သည်ဖြုန်းတီး !! ဒါဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်လား။ 🙁
Gentoo developer များကအလွန်ပါးနပ်သောကြောင့် tar, ./configure, make, etc စသည်တို့သည် ... ၏စွမ်းအားဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ Portage။ ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော setting များအားလုံးကို USE flags ဟုအမည်ပြောင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သတ်မှတ်ထားသော setting တစ်ခုလိုအပ်ပါက source code ကိုရိုက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ portage တွင် sudo ဖြင့်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုဥပမာပြပါ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံတွင်မည်သည့်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်ကိုတွေ့လိမ့်မည် ညီမျှခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ အနီရောင်ရွေးစရာများကို activate လုပ်သည်၊ အပြာရောင်များမှာမဟုတ်ပါ၊ လူတိုင်းကဒဏ္readာရီကိုဖတ်နိုင်ကြသည်
ခေါ်ဖိုင်ထဲမှာလိုင်းထည့်ခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည် sudo အတွင်း၌ (အမည်ရည်ညွှန်းသည်) /etc/portage/package.use/. နောက်တစ်ခါ sudo ကို install လုပ်သောအခါ၎င်းသည် activated option နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြောလိမ့်မည်။
ငါတို့ပေးရင် ဟုတ်သည်သင်လုပ်ရမှာကခဏစောင့်ပြီး voila this ဒီလောက်ရိုးရှင်းပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာပရိုဂရမ်များအတွင်းရွေးချယ်စရာများကိုထပ်ဖြည့်ရန်၊ ပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် Gentoo တွင်အပိုလုပ်ဆောင်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့စုစည်းထားသည့် variable များအပေါ်များစွာမူတည်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်စက်အသစ်တစ်ခုရှိပါက Gentoo သည်သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင့်တွင်စက်ဟောင်းတစ်လုံးရှိလျှင်၊ Gentoo သည်လည်းသင်၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည် (compile လုပ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသော်လည်းနောက်ဆုံးပရိုဂရမ်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးလိမ့်မည်) ။
ငါ SystemD ချစ်သူများနှင့် OpenRC စွန့်စားသူနှစ် ဦး စလုံး (ငါသည် systemd ကို GNOME နှင့်အတူအသုံးပြုသည်) အတွက်နှစ် ဦး စလုံး, ငါ့ Gentoo installation ကိုလမ်းညွှန်ရေးသားလိမ့်မည်။ စကားမစပ်, Gentoo ၏နောက်ထပ်ကြီးစွာသောအားသာချက်တစ်ခုစွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ် ရှေးခယျြ သင်၏စနစ်အတွင်းရှိအရာအားလုံး၊ ငါပြောသည့်အခါအရာအားလုံးဖြစ်သည် အားလုံး.
သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်ကိုလွဲချော်ခဲ့ပါကဤ link သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Gentoo: ငါဘာလို့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်တွေရေးဖို့ရွေးချယ်တာလဲ။
ကောင်းတယ် Gentoo နဲ့ Gnome installation လမ်းညွှန်ကိုငါစောင့်နေလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်မှာကွန်ပျူတာဟောင်းအဟောင်းရှိနေတုန်းတောင်မှ Gentoo ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကျွန်တော်အားပေးနိုင်ပါတယ် (intel core i5 3rd gen ။ ) ရွှင်လန်း!
မကြာခင်မှာပဲ Mart Gana ဟာအရာရာကိုမျှဝေဖို့ကျွန်တော့်ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ထုတ်ဝေဖို့စောင့်နေတဲ့နောက်စာတစ်စောင်ကိုငါရေးခဲ့တယ်။
ငါအကြိုက်ဆုံး linux ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးပို့စ်တွေအများကြီးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် o!!
ငါ Gentoo မှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းကရှိခဲ့ပြီး၊ ငါလေ့လာခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်မှာ Mail Server တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့သုံးခဲ့တယ်။ (ငါအခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့နေရာ) ။ ကြိုကြားကြိုကြားကြိုကြားကြိုကြားလှည့်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေခံစားခဲ့ရပေမယ့်အမြဲတမ်းငါချစ်ရတဲ့ Gertroodis နဲ့အတူပြန်လာခဲ့တယ် Gnome2005, Xfce နှင့်ယခု openbox တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဗဟုသုတတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူ၎င်းကိုညှိနှိုင်းရန်သင်ယခင် post တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း😉
မင်းရဲ့နောက်ထပ်အလှူငွေများ၊ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများနှင့်ကျွန်ုပ်၏နေ့ = D ကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ၊ နောက်တစ်ကြောင်းထွက်လာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးအကြောင်းအရာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဖျော်ဖြေရေးစကားပြောဆိုခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်၊ နောက်တစ်ခုသည်မကြာမီ၊ နောက်တစ်ခုနှင့်နောက်တစ်နေ့ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ distros အကြားခုန်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သတ္တုတွင်း compiling စဉ်းစားခဲ့…။ အဲဒီလမ်းညွှန်ငါပျောက်နေသောခြေလှမ်းဖြစ်သွားသည် ... ။ ငါလက်စွဲစာအုပ်နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေသွားနေစဉ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ......
ကောင်းပြီ၊ လက်စွဲစာအုပ်သည်သတင်းအချက်အလက်ပရဒိသုဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းရှိသည်။ simply ကျွန်ုပ်၏သဲအနည်းငယ်မျှသာထည့် ၀ င်နိုင်သော်လည်း🙂မကြာမီတွင်လာမည့် post သည်ထွက်လာလိမ့်မည်။ မကြာမီ (၎င်းသည်မျှော်လင့်ထားကြောင်းထင်ရှားသည်) ~ 20 ခြေလှမ်းများ installation ကိုလမ်းညွှန်။ ရွှင်လန်း
ခင်ဗျားကငါ့ကိုမိုက်ခရိုပရိုဆက်ဆာတွေအကြောင်းပြောတယ်၊ ဒီနေရာမှာလမ်းညွှန်ကဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမင်းကနေငါ့ကိုအချိန်ပေးဖို့မပေးခဲ့တာလား။ ငါ့ကိုဒီအဆုံးကိုပထမ ဦး ဆုံးအဘို့အတက် messed! !!! သန်းပေါင်းများစွာ၏ကျေးဇူးတင်စကား !!!!
Knoppix, Mandrake, Ubuntu နှင့် Debian ... Gentoo ကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်။
သူတို့အားအဆင့် ၂၀ ကိုစောင့်နေပါသည်။
hahaha ကောင်းပြီ၊ ဒါကအိပ်မက်မဟုတ်ဘူးလား။ happen ဖြစ်ပျက်ရန်အချိန်ရောက်ပြီဟု🙂ငါပြောလိုက်သည်
မင်္ဂလာပါ ChrisADR၊ ပထမ ဦး ဆုံးပြောချင်တာက Gentoo မှာခင်ဗျားရဲ့ပထမဆုံးဆောင်းပါးရေးကတည်းကကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမအိပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒီဆောင်းပါးအသစ်နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်၊ ​​ငါ့အိပ်မက်တွေက Aspire One Netbook ဟောင်းပေါ်တွင် Gentoo ကိုအခြေခံပြီးအခြေပြုသည်။ ကျွန်တော့်အိပ်မက်ထဲမှာ system ကကျွန်တော့် netbook ကအရမ်းဟောင်းနေပြီဆိုတော့ hardware ကိုမသိဘူး။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ Gentoo တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးကျွန်မအာရုံစိုက်မိလိုက်တယ်၊ ကွန်ပျူတာ (ကွန်ပျူတာ) မှာပေးထားတဲ့စွမ်းအားကိုသူတို့ပြောခဲ့တယ်။ ထို နေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တနေ့တပ်ဆင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့သည်မှာ ၁၀ နှစ်ကျော်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်မလုပ်ရသေးပါ၊ သူတို့က၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းကြောင်းပြောသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် anti-linux နီးပါးဖြစ်ခဲ့သည် ဒါကြောင့်သူတို့ကငါ့ဆီမကျေနပ်မှုတွေတိုးလာတယ်။ သို့သော်သိချင်စိတ်ဆက်ရှိနေသည်။ တစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ netbook မှာ BSD ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ Gentoo က BSD လို linux လို့ပြောတယ်
Gentoo ကို Atom compiler အဟောင်းနှင့်အရင်ထားရန်ကျွန်ုပ်ကိုဘာအကြံပေးချင်ပါသလဲ။
Cool As Ice အားပြန်ကြားပါ
ကောင်းပြီ၊ ငါမင်းကိုအကြံပေးတယ်၊ နောက်ဆုံးအဆုံး၌၎င်းသည်ပျက်ကွက်ပါက (ငါကသံသယအမျိုးမျိုးသော hardware များကိုထောက်ပံ့ရန်ပြုလုပ်သောကြောင့် kernel ကိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ) သင်သည် Linux လောကတွင်အလွန်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောအတွေ့အကြုံကိုရရှိလိမ့်မည်။ 🙂သင်သည်သင်၏ kernel ကိုရေးဆွဲလိမ့်မည်။ သင်၏ဖိုင်စနစ်ကိုအစမှစတင်တပ်ဆင်ပြီး၊ သင်သည်သူတို့၏ဘ ၀ ၌အနည်းငယ်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ you ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား Unix & StackExchange ပရိုဖိုင်းကိုမမြင်ရပါက answers ကျွန်ုပ်၏အဖြေများသည် Linux ရှိကျယ်ပြန့်သောအကာအကွယ်ကိုဖော်ပြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Gentoo ကိုသိခြင်းက Linux နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးသိခွင့်ရစေတယ်။ my ဒီမှာငါ့ပရိုဖိုင်ရဲ့လင့်ခ်ကိုငါထားခဲ့တယ်
မကြောက်ပါနဲ့နောက်ဆုံးတွင်အရာရာအားလုံးကောင်းမွန်သွားလျှင် (၎င်းသည်costကန်အမှန်အနည်းငယ်ကုန်ကျမည်) your သင်၏စာအုပ်အတွက်အောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်😉 Greetings
ငါသည်လည်း Gentoo သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်စဉ်းစားသော်လည်း, ငါအချို့သံသယရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ Arch သို့ package များသည်မည်မျှ up-to-date ဖြစ်သနည်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့တွင်ဘက်ထရီပါ ၀ င်ပြီး၊ ဘက်ထရီများသို့အဆက်မပြတ်အပူလွန်ကဲနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ငါအချိန်အများကြီးဖြုန်းမယ်လို့ကတည်းက ...
ကောင်းပြီအမှန်တရားကဘယ် Rolling Release ကဘယ်ဟာလဲဆိုတာသေချာစွာမပြောနိုင်ဘူး။ ငါသေချာပေါက်ပြောနိုင်တာကတော့ Gentoo မှာဌာနခွဲနှစ်ခုရှိတယ်။ တည်ငြိမ်တယ်၊ မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတာရှိတယ်။ အထင်ရှားဆုံးသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပါ ၀ င်သော package များ၌ငါ၌ယနေ့ခေတ်တွင်ပြcomplနာများမရှိဘဲအသုံးပြုသောကျော်ကြားသူများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်စီမံကိန်း၏ git repositories တွင်အလုပ်လုပ်ရန်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့်လက်ရှိဘာမှမရှိပါ။ stable ကျွန်ုပ်သည် "တည်ငြိမ်သော" ဌာနခွဲကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သုံးပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ရပ်ရွာတွင်းရှိကျွန်ုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်လုံခြုံရေးညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်နှင့်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ စမ်းသပ်အဖွဲ့ (Arch စမ်းသပ်သူ) ။ အကယ်၍ သင်၏အလုပ်အတွက်“ တည်ငြိမ်သော” ဗားရှင်းမလိုပါကသင်“ တည်ငြိမ်မှုမရှိသော” နည်းပညာ၏ရှေ့တန်းကိုရောက်လိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
ငါ C သင်ခန်းစာများအကြောင်း Python အပြင်သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ မတည်ငြိမ်တဲ့အဘိုးအဘွားတွေအတွက်လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်ငါကျေးဇူးတင်တယ်။
ငါနှင့်အကြောင်းအရာများသည်တိုက်ကြီးထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုထင်သောကြောင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ရိုသေလေးစားမှုနှင့်တုတ်ချောင်းအချို့ကိုချခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာစကားနှင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးမှုရှိသည်ကိုသင်အနည်းငယ်ပြောပြလိမ့်မည်။
"Compilation ဆိုတာ compiler ကလူ့ဘာသာစကားနဲ့ရေးထားတဲ့ code ကိုသုံးပြီးစက်တစ်ခုမှနားလည်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ။ "
စုစည်းခြင်းဆိုသည်မှာပရိုဂရမ်သည်ဘာသာစကားတစ်ခု (C, C ++) ဖြင့်ရေးသားထားသောစာသားဖိုင်မှကွန်ပျူတာမှ executable ဖိုင်တစ်ခုမှရရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
နှစ်ထပ် D ဟုသူကပြောသည်
Ubuntu 16.04 ကိုသုံးနေတယ်။ gentoo ကိုပြောင်းသင့်တယ်လို့ထင်သလား Gentoo နဲ့ ubuntu နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲ။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တကယ်မသိပါ😛၎င်းသည်သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ သင်၌ရှိသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် Gentoo မည်သို့သုံးရမည်ကိုလေ့လာရန်သင်အချိန် (နှင့်ဆန္ဒရှိလျှင်) ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါပြောတာကမင်းမှာအချိန်ရှိရင်မင်းခံစားခဲ့ရရင်မင်းကိုရှေ့ဆက်သွားနိူင်တယ်။ ပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်သင်ခန်းစာအများကြီးသင်ယူမယ်ဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်
အကယ်၍ gentoo တွင်စာဖတ်ရန်များစွာရှိသည်ဆိုပါက၊ ဥပမာသင်သည် emerge -pv အထုပ်ကိုလုပ်ပြီးအနီရောင်၊ အပြာရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အသုံးပြုမှုများကိုအသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုမှုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်သော့ခလောက်များ၊ unmask packages များ၊ အထုပ်အပြောင်းအလဲများသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည် အဘယ်အရာကိုအခြားအထုပ်မန်နေဂျာများကပြသ။
Gentoo ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမွမ်းမံရန်လိုလိမ့်မည်၊ အကယ်၍ သင်က ၁ လထားခဲ့ပါက၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုတွက်ထုတ်ရန်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ hehe၊ အစမှာဒီဟာနည်းနည်းနည်းသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမင်းနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာပြီးသင်ဟာအခြား package manager မှာဘာကြောင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းတောင်မှအချိန်နှင့်အမျှငါအတူတူရှိသူများကိုငါသိ၏။ နှစ်ပေါင်းများစွာ (လများစွာမဟုတ်ဘဲ) နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့သူများအတွက်ပြproblemနာအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းများကိုဖော်ပြသည့်အထူးကဏ္ is တစ်ခုမှာဆာဗာသည်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲနှစ်အတန်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးနေ့အဖြစ်လုံးဝခိုင်မာနေဆဲဖြစ်သည်။
ပြီးတော့နောက်ဆုံးသတင်းများအရလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြdirectlyနာများကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုရှုထောင့်အသစ်တစ်ခုယူစေခဲ့သည်။ သို့သော်နေ့တိုင်းမွမ်းမံခြင်းမှာဖြန့်ဖြူးမှုမည်သို့ပင်ပြုလုပ်သင့်သည်၊ များသောအားဖြင့်ဖြန့်ဝေမှုအားလုံးနှင့် gentoo တွင်အမိန့်နှစ်ခုထက်မပိုပါ။ အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုထုတ်လုပ်ခြင်းအပြင်ထုပ်ပိုးမှုအားလုံးစုဆောင်းမိသောအခါကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းကိုရှောင်ပါ။
binary distros များတွင် manjaro ကိုသုံးသည်။ ubuntu ကိုမသုံးမီ၊ update လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်၊ update များရှိမရှိနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစစ်ဆေးသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်သည်၊ သို့သော် manjaro မွမ်းမံခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြproblemsနာများကိုမပေးရ၊ pacman ကိုပြောသမျှအရာအားလုံးကိုပြောဖို့နှင့်အများဆုံးမှာလက်မှတ်ပေါင်းကို update လုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဖိုင်တစ်ခုကိုပင်ဖျက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် gentoo မှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အချက်အရ portage ကဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်။
fernan ကိုဘယ်တော့မှကောင်းအောင်မလုပ်ပါနှင့်ဟုပြောပါ။ အကယ်၍ သင်သည် GNU / Linux သို့ရောက်လျှင်၎င်းကိုသင်သိပြီးနားလည်သင့်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ဘာမှမမြင်နိုင်ပါ၊ ရိုးရှင်းစွာထုံးစံရှိသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအနီရောင်သည်သင်၌ရှိသည်၊ အပြာမရှိ၊ အပြာ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်စွာ configure လုပ်ထားပါကတစ်ခါတစ်ရံတွင် USE အလံများကိုထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဘာမှပြောင်းလဲစရာမလိုပါ။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့် Y ကိုဟုတ်ကဲ့ပေးခြင်းအားဖြင့်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည်။
PS: pacman -yy သည် emerge -sync နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
Pacman -uy သည် emerge -uD @world နှင့်တူသည် (the -av သည်စကားမပြောနိုင်ဘဲရှေ့ဆက်မသွားမီသင့်အားမေးမြန်းရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အသင်းကိုသိလျှင်သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်သိလျှင်မလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပြavoidနာများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ နောက်မှ😉) မှတ်မိဖို့သိပ်ခက်တယ် I
Mauricio လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ဒီဆောင်းပါးတွေဟာအလွန်ကောင်းတယ်။ Arch နဲ့ Manjaro နဲ့ Gentoo တို့ရဲ့အမြန်နှုန်းကဘယ်လောက်မြန်သလဲဆိုတာကျွန်တော်သံသယရှိတယ်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လေ့လာခြင်းမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၎င်းတို့သည်ထည့်သွင်းရန်ထိုက်တန်သည်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ယာဉ်မောင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါကကျွန်တော့်ကို Arch မှာပြproblemsနာတွေဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီ, ငါနှစ်ခုအကြားအခြေခံစံနှုန်းမှရပ်တန့်ဘယ်တော့မှဘူး, တကယ်တော့ဒါဟာသင်အသုံးပြုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုနှင့်သင်ရှိသည်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်။ အလွန်စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, ဒီအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ဘာမျှမကနေအများကြီးကွဲပြားနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ဒီနေ့အတွက်နှစ်မျိုးစလုံးသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လိုအပ်သောအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အတော်အတန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကို virtualization နှင့် program editing တွင်သုံးသည် (သို့သော်များသောအားဖြင့် terminal မှ၎င်းသည် IDE တွင်မှတ်ဉာဏ်သိပ်မသုံးသောကြောင့် Chrome သည်ကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာထောက်ခံသည်) tabs 40 ကျော် (ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အမြင့်ဆုံး5သာဖွင့်လှစ်ပေမယ့်ပေမယ့်, အခြိနျမှနျမှဒီကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
တစ်နေ့သင်ကြိုးစားဝံ့မည်ဆိုပါကမည်သို့ how သွားခဲ့ကြောင်း tell ပြောပြပါ
driver များအနေဖြင့်သင်အလိုအလျောက် kernel ကိုထိန်းချုပ်သောကြောင့်၊ ပုံမှန်အားဖြင့် "common" driver အများစုသည် installable ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး manageable ဖြစ်သည်။ အထူးပြုဟာ့ဒ်ဝဲ (အထူးသဖြင့်ယေဘုယျအားဖြင့် Linux နှင့်သဟဇာတအနည်းငယ်) ရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည်အခြား distros များနှင့်အတူတူပင်အလုပ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်အထူး hardware ရှိသည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုများစွာမှတ်ချက်မပေးနိုင်ပါ။
သင်၏လူမှုကွန်ယက်များဖြစ်သော ChirsADR ကဘာလဲ။